Otu esi ahọrọ ihe akpa nchekwa gburugburu anaghị kpara akpa
Akpa anaghị akpa
Akpa kpara akpa
Akpa ihe osise
Akpa nwere ike mpịachi
Akpa akpụkpọ ụkwụ
Ihe dị mma akpa na-abụghị akpasiri ike, na-adịgide adịgide, mara mma n'ọdịdị, ọ dị mma na ikuku ikuku, reusable, washable, silk-screenable maka mgbasa ozi, akara, ma nwee ogologo ndụ ọrụ. Ọ dabara maka ụlọ ọrụ ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla dị ka mgbasa ozi na onyinye.
Ọnụ ego nke Guangzhou Tongxing Packaging Co., Ltd. ọpụrụiche na akpa akpa eco-eco-eco-friendly emebere nke ọma, ma kesaa otu esi ahọrọ akwa maka akpa a na-ejighị akpa, nke mere na ọnụ ahịa akpa akpa na-abụghị nke emere ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya na ọnụ ahịa nkwalite ụlọ ọrụ dị ala.
A na-ahazi akpa eco-eco-friendly na-abụghị kpara dịka mkpa gị siri dị. A na-ejikarị akwa na-adịghị kpara akpa bụ gram 50, gram 75, gram 90, 100 grams, gram 120, gram 75 nwere ike ibu 4-6KG, gram 120 nwere ike ibu 10-13KG. N'ime usoro nhazi nke akpa na-abụghị nke a na-eji akwa akwa, a na-eme ka ahụ na ala nke akpa ahụ dịkwuo ike, a na-ahazikwa akpa nchekwa gburugburu ebe obibi na-enweghị akwa iji buru ibu na-enweghị nrụrụ, nke na-eme ka ọ dịkwuo irè.
Mgbe afọ nke ahụmahụ na-abụghị kpara akpa nhazi, ọhụrụ akwa na-abụghị nke a kpara akpanwere ezigbo gloss na ike tensile ike. Otú ọ dị, ụfọdụ akwa ngwaahịa ma ọ bụ ihe ndochi dị mfe ịdọka na nrụrụ.
Guangzhou Tongxing Packaging Co., Ltd. na-echetara na ahịa na-akwụ ụgwọ mgbe niile maka ihe ị na-akwụ. Adịla kpuo ìsì họrọ akwa ndị nwere ọnụ ahịa ahịa dị ala, nke pụtara na ogo ahụ adaala. Ọ kachasị mma ịhọrọ akpa ndị na-abụghị ndị a kpara akpa nke ndị na-emepụta ihe dị ike, ndị na-emepụta aha.
Akpa eco-friendly na-adịghị kpara akpana-ahaziri ịhọrọ akwa agba kwesịrị ekwesị, nke ndị ahịa na-ekpebi n'ozuzu dịka njirimara nke nkwakọ ngwaahịa na omenala ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Guangzhou Tongxing Packaging Co., Ltd. na-enye nhazi nke teknụzụ obibi akwụkwọ kwesịrị ekwesị, ederede na ụkpụrụ iji gosi omenala ụlọ ọrụ na ịma mma onwe onye. Igwe ọkụ ọkụ ọrụ ndị ahịa nke Guangzhou Tongxing nke awa 24 0086 15507908850 na-enye azịza ahaziri maka akpa anaghị kpara akpa, nke nwere ike belata ọnụ ahịa ahaziri maka ndị ahịa.
Oge nzipu: Nov-29-2021
Ndị na-ebunye akpa akwa ụlọ nkwari akụ, Akpa owu, Ndị na-ebunye akpa Tote owu,
Edemede nso nso a
Nhazi akpa ịchọ mma Guangzhou, Biko chọọ ndị ọkachamara na ndị nrụpụta oge niile
No.9, Huafu Road, Donghua ụlọ ọrụ mpaghara, Renhe obodo, Baiyun district, Guangzhou, China, 510470